Somali News | Dayactirada Maaliyadeed ee Suuqyada Sarrifka leh ee FXCC
Home / About / Ku saabsan FXCC / Shirkadda News
Shirkadaha Shirkadaha & Warfaafinta Ganacsiga
FXCC waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo sii wadida ololeheena Horumarinta
Iyadoo ay jirto danta sare ee ololeheena xayeysiinta, FXCC waxay ku faraxsan tahay in ay u sheegto macaamiisheena iyo la-hawlgalayaasheeda in dalabka lacag bixinta la sii wadi doono bisha Oktoobar.
Horumarinta gunnada waxay ujeedadeedu tahay inay ku abaal-mariso macaamiisheena cusub iyo sidoo kale macaamiisheena daacad ah iyagoo isku duba-riday 100% Bonus Start-up oo leh 50% Lacagta Maalgelinta ee sanduuq kasta oo la sameeyey bishii dhexdeeda! Taasina ma ahan - ganacsi kastaa waxay sameeyeen macaamiisheenna oo qaata dib u celin, halkaas oo aan ku abaalmarinno ganacsatada daacad ah oo leh lacag caddaan ah, kaash ah.
Diyaar ma u tahay inaad isticmaasho faa'iidooyinka kor u qaadkan? Riix halkan si aad u bilowdo haddii aadan haysan xisaabaad wali.
Macaamiisha horeyba u haystay xisaab FXCC waxayna rabaan ku biiritaanka dhiirigelinta ayaa la soo dhaweynayaa wakhti kasta si loo dalbado gunno!
* Fadlan tixraac Shuruudaha iyo Shuruudaha faahfaahinta dallacaadda lacagaha.
FXCC waxay bilawday goob cusub si ay u soo dhaweyso macaamiisha aan ka tirsanayn Midowga Yurub
Iyadoo qayb ka ah wadadeena joogtada ah si aan u ballaarinno gaadiidkeena caalamiga ah iyo in aan u fidino adeeggayaga dhagaystayaal caalami ah, FXCC waxay furtay website cusub oo ganacsi oo u adeegsanaya macaamiisheena aan macaamilada EU, ama macaamiisha yurub ee aan ka ganacsan Midowga Yurub Ujeedadu waa waxay u sahlanaataa in si fudud loo helo badeecadeenna iyo adeegyadeena, iyada oo la ilaalinayo bay'ad ganacsi oo ammaan ah macaamiisheena
Iyadoo la tixgelinayo tirada sii kordheysa ee ganacsatada soo galaya suuqa khudaarta, waxaanu qabanay hawsha ah in aan u suurtogelinno xaaladaha ganacsi ee wanaagsan, in aan bixinno qalab kala duwan iyo alaabooyin, iyada oo xoojinaysa daahfurnaanta iyo daacadnimada marwalba.
Inay noqoto mid ka mid ah shirkadaha ugu soo dhaweynaya iyo kalsoonida ganacsiga, yoolkeenu wuxuu yahay in la yareeyo macaamiishayada u adeega suuqa sirdoonka iyagoo ganacsi leh dulleeye la xaddiday.
Shirkadda Shirkadda Ganacsiga Shiinaha ee Shiinaha
Waxaan dhawaan soo bandhignay lacag dheeraad ah oo ku saabsan lacag bixinta iyo xisaabinta maalgalinta iyada oo loo marayo xiriirkeena la leh China Union Pay. In la abuuro xidhiidhkan cusub waxaan fureynaa albaab, oo u oggolaanaya ganacsatada FX ganacsi cusub iyo kuwa khibrad u leh dalalka Aasiyada sida China, inay si toos ah uga iibsadaan qaabka ganacsi ee ECX FXCC.
Shiinaha UnionPay waxaa lagu aasaasay 2002, shirkadda ayaa kor u kacday muddo shan iyo toban sano ah. Shiinaha Union Pay ayaa ku jira kaalinta saddexaad sida adeeg bixiyaha lacag bixinta, marka la eego qiimaha macaamil ganacsiga sanadlaha ah, oo ka dambeeya MasterCard iyo Visa. Sababtoo ah taageerada xukuumadda Shiinaha ee CUP ayaa noqotay adeeg bixiyeyaasha lacag bixinta ee loogu talagalay afarta shirkadood oo waaweyn oo Shiinaha ah.
Iyadoo loo yaqaano "Fideliye" ama "CUP", badanaa waxaa loo yaqaan 'CUP', adeeg bixiyaha ayaa hadda soo saarey shan bilyan oo doolar oo caalami ah. Shirkadda Shirkadda Shaqaalaha ee Shiinaha ayaa hadda ah qaab la aqbali karo oo lagu bixiyo lacag ka badan dalalka 150 iyo tan iyo markii 2009 Union Pay Card ay awood u yeesheen inay galaan mashiinnada Link in UK waxayna isticmaalaan kaararkooda si sahlan oo looga baxo dhammaan Yurubta.
Shirkadda Shiinaha ee Midawga Afrika waxay si degdeg ah u noqotay habka bixinta habka lacag bixinta ee dadka degan Shiinaha si ay u helaan suuqyada ganacsiga caalamiga ah. Shirkadda Shirkadda Shiinaha ee Midawga Yurub waxay qayb ka noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah warshadaha bangiga China. Waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaareen horumarinta guud ee warshadaha kaararka ee Shiinaha.
At FXCC waxaan markasta ku dadaalnaa sidii aan u horumarin laheyn dhammaan dhinacyada macaamiisheena diiradda saara. Sidan oo kale waxaan si joogto ah ula soconnaa warshadaha maaliyadeed ee hababka lacag bixinta ee cusub, si ay macaamiishayadu si sahlan u maalgeliyaan xisaabtooda, ama furaan xisaabaad cusub, si ay u ganacsadaan FX iyada oo loo marayo mareegaha MetaTrader.